जाहेरीवालाकै निवेदनपछि रुप ज्योतिविरुद्धको मुद्दा फिर्ता « Naya Page
जाहेरीवालाकै निवेदनपछि रुप ज्योतिविरुद्धको मुद्दा फिर्ता
प्रकाशित मिति : 14 November, 2019 12:41 pm
काठमाडौं, २८ कार्तिक । ठगी आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री तथा व्यवसायी डा. रुप ज्योतिविरुद्धको मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन परेको छ ।
ठगी आरोपमा पक्राउ परेका डा. रुप ज्योतिविरुद्धको मुद्दा फिर्ताका लागि जाहेरीकर्ता विगेन्द्रकृष्ण मल्ल स्वयम्ले प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् । एक हप्ताअघि जाहेरी परेपछि रुप ज्योति र उनकी छोरी सुरुची ज्योति पक्राउ परेका थिए ।
उनीविरुद्ध दुई पटक म्याद थप भएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा जाहेरवालाले फिर्ताको निवेदन दिएका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार मल्लले जाहेरी फिर्ताका लागि निवेदन दिए पनि प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल सरकारी वकिलमा बुझाइसकेको छ ।